रबि जि लाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख बनाएर सिमा मिचेको टुलुटुल हेर्ने नेपाली मुलका भारतिय भरौटेहरुलाई देश निकाला गरौ…सक्दो सेयर गर्नुहोला ! – " सुलभ खबर "
रबि जि लाई प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख बनाएर सिमा मिचेको टुलुटुल हेर्ने नेपाली मुलका भारतिय भरौटेहरुलाई देश निकाला गरौ…सक्दो सेयर गर्नुहोला !
लिपुलेक र कालापानी नेपालकै भुभाग हो भनेर सरकारलेपनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याएको छ । अत्यधिक वि*रोध त्यो बेला हुने गर्छ जब भारतले नेपाल वि*रुद्ध पटक पटक यस्तै घि*नौना कदमहरु चाल्छ। नेपालको भुभाग किन भारतले आफ्नो नक्सामा समेटेर सार्वजनिक गर्यो । यो एकदम ग*म्भिर रणनिति हो । नेपाली नेतृत्व प्रतिको अविश्वास हो ।
नेपाललाई हे*प्ने खेलहरुको निरन्तरता हो । नेपाललाई सिक्मिकरण गर्ने गम्भिर परिपञ्च हो । यस्तो भ*ण्डाफोर विश्वभर बाट हुनु आवश्यक छ । आज बोल्न सकेनौ भने त्यो दिन धेरै टाढा छैन् जुन दिन हामी रातारात भारतिय नागरिक भनेर चिनिने छौ । नेपालको अ*स्तित्व मेटाएर भारत एशियामा चिनभन्दा शक्तिशाली बन्ने दाउमा छ ।
कस्मिर मु*द्धामा पाकिस्तानसंग ठुलै रस्साकस्सी छ । ३७० धारा हटाएर कस्मिरलाई भारतिय केन्द्र सरकारको अधिनमा राख्नेगरी जुन खेल भारतले खेल्यो त्यस बि*रुद्ध पाकिस्तान चिढीएको छ । अहिले दुवै देश विच नराम्रो सम्बन्ध छ । भारतले जारी गरेको पछिल्लो नक्सालाई ग़लत भन्दै पाकिस्तानले अस्विकार गरेको छ । यसै विचमा नेपालपनि पिडित छ । भारतले रोटी र बेटीका सम्बन्ध बारे कुरा गरेर नेपाललाई फसाउन खोजेको छ ।
नेपाली नेतृत्व को राजनैतिक स्वार्थ को कारण देशको जमिन छिमेकी राष्ट्रले आफ्नो ज़मीन भनेर विश्वभर प्रचार गर्न खोजेको छ । यसको वि*रुद्धमा नेपाल सरकार , राजनैतिक दलका नेतृत्व हरु र केहि अन्य शक्तिहरु खुलेर बोल्न सक्दैनन् । यदि बोल्न सकेनन् भने अब जनताले तह लगाउनु पर्छ । नेपाली खुकुरी सहित हामी हाम्रो सिमा रक्षाकालागि तयार हुनुपर्छ ।
रबि दाईको नेतृत्वमा नेपालको समृद्धि सम्भव भएकाले यि कामै गर्न नसकिने नेताहरुलाई तह लगाउनु पर्छ । यो अभियान व्यापक बनाउन रबि लामिछाने दाई राजनितिमा आउनुपर्छ । उहाँको तयारी नै जनताको तयारी हो ।
देशको सिमा बारे बोल्न नसक्ने ग़*द्दार नेतृत्व लाई छानीछानी भारतिर ल*खेट्नुको बिकल्प छैन् । आज देश रोइरहेको छ । देशलाई एक राजनेता चाहिएको छ । हामीले राजनेता हुनसक्छन् की भनेर नेपाल मा विगतमा पनि केहि राजनैतिक दुनियाबाटै आएका व्यक्तित्व हरुलाई पनि विश्वास गर्यौ। सहयोग पनि गर्यौ। तर , देशको समृद्धिकालागि कोहिपनि निश्पक्ष रुपले बाहिर आउन सकेनन् । यो बिडम्बना नेपालले कहिलेसम्म खेपिरहने । अब देश लाई माथी उठाउन तिन करोड नेपालीका ढुकढुकी आदरणीय रबि दाई लाई राजनितिमा आउने बातावरण सवै मिलाउ । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्र प्रमुख को व्यवस्था आजको आवश्यकता हो ।
रबि लामिछाने , कुलमान घिसीङ्, धुर्मुस , निगम हुमागाई , अनुज थापा , रमेश खरेल , रुक्वाङ्गत कटुवाल, बाबुराम , रेखा थापा, गगन थापा, प्रदिप पौडेल, टोपबहादुर रायमाझी, योगेश भट्टराई, जनार्दन शर्मा, मिलन पाण्डेय, रबिन्द्र मिश्र,हिमानी शाही, ज्ञानेन्द्र शाही, खगेन्द्र सग्रौला, प्रेम बानिया,सुरेन्द्र केसी,रमेश प्रसाई, ज्वाला संग्रौला लगायत सवै जना एक ढिक्का भएर अगाडी बढौ । समृद्ध नेपाल निर्माणकालागि, देशको सिमा रक्षाकालागि अब केहि गर्नैपर्ने देखिएको छ । जापान, अमेरिका , युरोप , चिन लगायतका मुलुकहरुको विकास लोभलाग्दो छ ।
नेपाल यि मुलुकहरु भन्दा शक्तिशाली बन्न सक्छ । सवै युवाहरु रबि दाईलाई अगाडी सार्न कम्मर कसौ । दलाल , भ्रष्टाचारी , ब*लात्कारी, देश बेचेर खाने लु*टेराहरु, अ*राजकता मच्चाउनेहरु , देशको ढुकुटीमाथी रज़ाई गर्नेहरु लाई देशबाट ल*खेट्नैपर्ने देखिएको छ । अब को एकमात्र सहि विकल्प हाम्रो आदरणीय रबि लामिछाने दाई हुन् । सवैको सहभागितामा रबि दाईलाई कार्यकारी प्रमुख बनाएर अरु भारतबाट परिचालित केहि देशका लुटेराहरु बि*रुद्ध सवै एक हौ । जय देश , जय स्वाभिमान..!!